OTU ESI EMEPỤTA BỌTỊNỤ NA EXCEL - EXCEL - 2019
Ịmepụta bọtịnụ na Microsoft Excel
Adobe Flash Professional - usoro e mere iji mepụta ngwa ngwa mmekọrịta na ihuenyo, ọkọlọtọ nkiri, ngosi, yana mmegharị.
Ụkpụrụ nke software ahụ dabeere na vector morphing - na-agbanwe agbanwe nke ọdịdị nke ihe mbụ ahụ, nke na-enye gị ohere ịmepụta ọsọ ọsọ na-eji nanị okpokoro isi abụọ. A na-enyefe etu ọ bụla ọrụ nke ya, nke a pụrụ ịkọwa ya site n'aka ọkọlọtọ ma ọ bụ jiri aka mepụtara site na iji edemede.
Ihe omume ahụ, na mgbakwunye na ọkọlọtọ na eserese, na-enye gị ohere ịmepụta ngwa AIR maka PC na mobile platforms - Android na iOS.
Ụkpụrụ - faịlụ ndị ejikere mepụtara - na - eji ngwa ngwa rụọ ọrụ wọkspeesi. Nke a nwere ike ịbụ nhazi nke ihe mgbasa ozi, ihe ngosi, ngosi ma ọ bụ ngwa.
Ogwe ngwaọrụ nwere ngwaọrụ maka ịhọrọ, ịmepụta ụdị na ederede, na maka ịbịaru - brush, pensụl, jupụta na ehichapụ. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ọrụ nke mmekọrịta na ihe 3D.
Mgbanwe na mgbanwe
Ihe ka ukwuu n'ime ihe ndị dị na waaaji nwere ike gbanwee - akpadoro, gbanwee ma ọ bụ tụgharịa. Enwere ike ime nke a ma aka ma ọ bụ site na ịtọ ntọala ụfọdụ na degrees ma ọ bụ percentages.
Edoziri ọrụ mmezi iji gbanwee ihe onwunwe nke ihe - gbanwee vektị n'ime ihe oyiyi azụ na azụ, mepụta ihe nnọchianya, ọdịdị, na ijikọta ihe. Ụdị ọ bụla nwere ntọala ya.
A na-eme ihe ngosi na usoro iheomume na ala nke interface. Ọ na-agụnye ọkwa, nke ọ bụla nwere ike ịnwe ihe dị iche. A na-enwe mmetụta ntụgharị site na ịpịnye okpokolo agba na paragraf ndị a kapịrị ọnụ. Dịka e kwuru n'elu, usoro ihe omume ahụ nwere ụdị omume dị iche iche na ikike ịmepụta ihe nke gị site na iji edemede (iwu).
E nyere iwu ma ọ bụ ederede na Action Script 3. Maka nke a, onye nchịkọta dị mfe dị na mmemme ahụ.
E nwere ike ịchekwa ọrụ ndị a rụchara, wepụga ya, na ihe odide nke atọ ndị ọzọ.
Enwere ike itinye ntinye (plug-ins) nke enwere ike itinye na ya iji mee ka ọ dị mfe ma mee ka ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ, KeyFrameCaddy na-enyere aka na -eme ihe odide na ihe ndị ọzọ, V-Cam na-agbakwụnye igwefoto arụmọrụ na njirimara ndị mara mma, na ihe ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ gọọmentị maka tinye-ons maka ngwaahịa Adobe nwere ụdị nkwụnye dịgasị iche, ma akwụ ụgwọ na n'efu.
Ịmepụta mmegharị na ngwa na ọkwa ọkwa;
Ọnụnọ nke nnukwu ndepụta nke ndebiri;
Ikike ịwụnye nkwụnye ins na-agba ọsọ ọrụ ma gbakwunye atụmatụ ọhụrụ;
A na-asụgharịrị interface na akwụkwọ na Russian.
Ihe omume a dị oke mgbagwoju anya, nke chọrọ nyocha ogologo oge banyere atụmatụ na ọrụ niile;
Akwụ ụgwọ ụgwọ.
Adobe Flash Professional bụ ọkachamara ọkachamara maka ndị mmepe nke mmemme flash, ebe nkiri na ihe dị iche iche nke mmekọrịta weebụ. Ọnụnọ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ, ntọala na ndapụta na-enye onye ọrụ aka ịmụta usoro ihe omume iji nagide ihe ọ bụla ọrụ iji mepụta ihe na tebụl Flash.
N'oge nyochaa a, a naghịzi ekesa ngwaahịa a n'aha a - ugbu a a na-akpọ ya Adobe Animate na ọ bụ onye nọchiri ya na Flash Professional. Usoro mmemme ahụ agbanwebeghị mgbanwe dị na interface na arụmọrụ, ya mere mgbanwe gaa na mbipụta ọhụrụ ahụ agaghị akpata nsogbu.
Download mbipụta nke Adobe Flash Professional
Adobe Flash Builder Mmemme maka ịmepụta mmemme flash Esi chọpụta ụdị Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Adobe Flash Professional bụ mmemme nke na-enye gị ohere ịmepụta ngwa-ngwa, tinyere maka ntanetị igwefoto, ọkọlọtọ nkiri na njirimara interface. Na-akwado ọrụ na asụsụ mmemme Action Script 3.
Onye Mmepụta: Adobe
Ọnụ: $ 22